सेयर बजार : पैसाको समुद्र | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सेयर बजार : पैसाको समुद्र
सेयरमा पैसै बनाउन सकिएन । सेयर बजारमा लगानी गर्ने धेरैले भनेको सुनिन्छ । सामाजिक सन्जालमा त गुनासा गर्नेको भीड नै हुन्छ । धेरै अध्ययनहरुमा पनि सेयर बजारमा ९० प्रतिशतले गुमाउने १० प्रतिशतले कमाउने भन्ने त कति हो कति ।
के तपाईंलाई लाग्छ ? सेयर बजारमा पैसा बन्दैन ? या सेयर बजारमा पैसै वा सम्पत्ति नै छैन ? यसको जवाफ खोज्न म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को वेबसाइटमा केही समय भौंतारिएँ । यसैगरी, केही विदेशी स्टक एक्सचेन्जका वेबसाइटको पनि भ्रमण गरेँ ।
नेप्सेको वेब साइटमा अगाडिको पेजमा लेखिएको थियो- बजार पुँजीकरण (मार्केट क्यापिटलाइजेसन) १५ खर्ब ।
मेरो म्यासेन्जरमा धेरै जिज्ञासुको प्रश्न पनि थियो- यो नेप्सेको वेब पेजमा मार्केट क्यापिटलाइजेसन भन्छ नि त्यो के हो ? जवाफमा मैले उनीहरुलाई भने, ‘यो पैसाको समुद्र अनि सम्पत्तिको पोको होे । जुन लचकदार हुन्छ । घटबढ भइरहन्छ ।’
कतिले थप प्रश्न गर्दै सोधेका थिए, ‘कसरी ?’
अनि मैले सुरु गरेँ- पैसाको समुद्रको बाटो ।
बजार पुँजीकरण भनेको नेप्सेमा सूचीकरण (दर्ता) भएका सबै कम्पनीको कुल सेयरको कुल मूल्य हो । बजार पुँजीकरणलाई तीन किसिमबाट हेरिन्छ । जस्तैः व्यक्तिको बजार पुँजीकरण, कम्पनीको बजार पुँजीकरण र समग्र बजारको पुँजीकरण । उदाहरणका लागि तपाईंसँग नबिल बैंकको १००० कित्ता सेयर छ । नबिल बैंकको आजको अन्तिम कारोबार मूल्य प्रतिसेयर ८०० रुपैयाँ छ भने तपाईंसँग भएको सेयरको कुल मूल्य ८ लाख रुपैयाँ भयो । यो आठ लाख रुपैयाँ तपाईंसँग भएको सेयरको कुल बजार मूल्य वा कुल बजार पुँजीकरण हो । त्यतिमात्र नभई यो तपाईंको कुल सम्पत्ति पनि हो ।
यस्तै नबिलको नेप्सेमा १० करोड कित्ता सेयर सूचीकरण भएका छन् वा नबिल बैंकको कुल सेयर संख्या १० करोड कित्ता छ भने आजको सेयर मूल्य ८०० रुपैयाँका आधारमा सबै सेयरको कुल बजार मूल्य ८० अर्ब हुन जान्छ । यो ८० अर्बलाई नबिल बैंकको कुल बजार पुँजीकरण भनिन्छ । यो नै कम्पनीको बजार पुँजीकरण हो । अर्कोतर्फ यो भनेको नबिल बैंकका सबै सेयरधनीको आजको कुल सम्पत्ति पनि हो । यसको अर्थ नबिलको सेयरमा लगानी गर्नेको कुल सम्पत्ति ८० अर्ब रुपैयाँ छ ।
यसभित्र कुन सेयर धनीको कति सम्पत्ति भन्ने कुरा उनीहरुले नबिलको कति कित्ता सेयर राखेका छन्, त्यसमा भर पर्छ । जसले नबिल बैंकको कुल मूल्यमा उनीहरुको सम्पत्तिको हिस्सालाइ पनि जनाउँछ । सेयरधनीको सूची र तिनीसँग भएका सेयरको कुल मूल्य हे-यौं भने नबिल बैंकका धेरै सेयरधनी करोडपति र अर्बपति बनेका छन् । अन्य सूचीकृत कम्पनीको पनि यसरी नै बजार पुँजीकरण, सेयरधनी र उनीहरुले होल्ड गरेको सेयरको कुल मूल्य हे-यौं भने त्यस्ता कयौं लखपति, करोडपति र अर्बपति पाउन सकिन्छ ।
अर्को भनेको समग्र सेयर बजारको कुल बजारको पुँजीकरण हो । नबिल बैंक जस्तै नेप्सेमा सूचीकरण भएका सबै कम्पनीको यसरी नै सेयरको कुल मूल्य निकालेर जोड्दा आउने रकमलाई समग्र बजारको कुल बजार पुँजीकरण भनिन्छ । यो भनेको सेयर बजारमा लगानी गर्ने सबैको कुल सम्पत्ति हो । २०७२ सालमा नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीका सबै सेयरधनीको सम्पत्ति २१ खर्ब पुगेको थियो । अहिले १५ खर्ब छ । यो हेरेपछि मलाई लाग्यो- यो पैसाको कुवा, पोखरी या ताल नभई समुद्र नै हो । सकेजति उघाउँदा हुन्छ । आफ्नो हिस्सा बढाए हुन्छ ।
नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीका सेयरको कुल मूल्यको सूची बनाउँदै जाने हो भने अर्बभन्दा बढी पुँजीकरण भएका धेरै कम्पनी पाउन सकिन्छ । यो सबै सेयरधनीको पैसा हो वा सम्पत्ति हो । नेप्सेको वेबपेजमा गएर यसरी नै कम्पनी छान्दै त्यसको बजार पुँजीकरण हेर्नुभयो भने थाहा हुनेछ- सेयर बजारमा कति पैसा वा सम्पत्ति रहेछ भनेर । हरेक देशका स्टक एक्सचेन्जमा गएर हेर्नुभयो भने यस्ता अर्ब अनगिन्ती संख्यामा पाउन सक्नुहुन्छ । त्यसपछि तपाईंले सेयर बजारलाई साँच्चिकै पैसाको समुद्र या सम्पत्तिको पोकोका रुपमा देख्नुहुनेछ, जुन अन्यत्र विरलै पाउन सकिन्छ ।
मलाई लाग्यो- यो पैसाको कुवा, पोखरी या ताल नभई समुद्र नै हो । सकेजति उघाउँदा हुन्छ । आफ्नो हिस्सा बढाए हुन्छ ।
सेयर किनेको समय कसैको अलि लामो भयो होला, कसैको अलिक छोटो तर जति समय भए पनि सेयर बजारको प्रणालीले पैसाको समुद्रको आकार बढाउँदै लगेको छ । विवेकको प्रयोग र धैर्य गर्नेहरुले समुद्रमा आफ्नो हिस्सा पनि सोहीअनुसार बढाउँदै गइरहेका हुन्छन् । हरेक वर्ष सम्पत्ति थपिँदै गएको हुन्छ । सही कम्पनी छानेर धैर्य गर्न सके समुद्रमा तपाईंको हिस्सा बढ्दै जान्छ र त्यो सुस्त गतिमा नभई द्रुत गतिमा । र, यो यसरी बढ्छ जसरी हिउँमा गुड्काउँदा हिउँको डल्लो बढ्छ । हिउँको डल्लो बनाएर हिउँमा गुड्काउँदै जानुभयो भने डल्लो घट्ने होइन, त्यो निरन्तर बढिरहेको हुन्छ, जसलाई चक्रवृत्ति हिसाबको बढाइ पनि भनिन्छ । चत्रवृत्तिले वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजको पनि ब्याज (ब्याजको स्याज) प्राप्त गर्नु भन्नेलाई जनाउँछ, जसलाई न्युटनले वित्तीय क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो आविस्कार पनि भनेका थिए ।
सेयर बजारमा पैसा कसरी हिउँको डल्लोझैं बढ्छ र मानिसले पैसा वा सम्पत्ति आफूतिर केन्द्रित गर्दै जान्छन् भन्ने हेर्नका लागि लघुवित्तको काम गरिरहेको छिमेक विकास बैंकलाई मैले उदाहरणका रुपमा लिएँ । यसको ६ वर्षअघिको सेयर मूल्य र ६ वर्षको लाभांश राखेर अहिलेसम्मको परिणाम हेरेँ । जसले सेयरमा सम्पत्ति कसरी हिँउको डल्लोझैं बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ ।
हुन त सेयर बजारमा विगतको प्रतिफलले भविष्यमा कमाउने निश्चितता प्रदान गर्दैन भनेर भन्ने गरिन्छ । यसको अर्थ विगतमा कम्पनीको सेयर मूल्य यति पुगेको थियो भन्दैमा भविष्यमा पुनः त्यति नै पुग्छ भन्ने कुनै निश्चितता हुँदैन । त्यस्तै विगतमा कम्पनीले कमाएको नाफा भविष्यमा पनि कमाउँछ नै भन्ने पनि हुँदैन । विगतमा कसैले कमाएको थियो भन्ने आधारमा गरिएको लगानीले तपाईं हामीले पनि कमाउँछौ भन्ने कुनै निश्चितता हुँदैन । तर पनि लगानीमा विश्लेषणको एउटा महत्वपूर्ण आधार भनेको विगतको परिणाम पनि हो । त्यसलाई नकार्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा विगतले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाइरहेका हुन्छन् ।
छिमेक विकास बैंकको आर्थिक वर्ष २०६९/७० को अन्तिम वा २०७० असार मसान्तको अन्तिम कारोबार मूल्य ५११ रुपैयाँ प्रतिसेयर छ । त्यस मूल्यमा २०० कित्ता सेयर एक लाख दुई हजार दुई सय रुपैयाँ लगानी गरेर २०७६ साउनसम्म होल्ड गर्नेको सम्पत्ति कति गुणा बढ्यो होला ? यसको अहिलेको अवस्था देख्दा तपाईं हामी धेरैले एकपटक जिब्रो टोक्छौं । कतिले टाउकोमा हात पनि राखौंला । कसैले अल्पकालीन कारोबार गरिरहेका छौं भने ठूलै पश्चाताप पनि लाग्न सक्छ । ६ वर्षअघि एक लाख लगानी गर्नेको अहिलेको सम्पत्ति नगद र बोनस लाभांशसहित १२ लाख रुपैयाँ हुन्छ । पाँच लाख लगानी गर्नेको ६० लाख र १० लाख लगानी गर्नेको १ करोड २० लाख रुपैयाँको सम्पत्ति हुन जान्छ । यो भनेको वार्षिक करिब ३५ प्रतिशतको चक्रवृत्ति वृद्धि हो । यो उदाहरणले सही कम्पनी छनोटबाट सेयर बजारमा हुने सम्पत्तिको चक्रवृत्ति वृद्धिमात्र नदेखाई दीर्घकालीन लगानीमा प्राप्त हुने प्रतिफल र सम्पत्ति निर्माणमा दीर्घकालीन लगानीको ताकतलाई पनि देखाउँछ ।
पछिल्लाे - उहिले हुँदा खानेको कोदो अहिले हुने खानेको रोजाइमा
अघिल्लाे - सानिमा बैंकको नाफा २ अर्ब २४ करोड, प्रतिसेयर आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि